“The Message Of Islam အပိုင်း ၁” | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
“The Message Of Islam အပိုင်း ၁”
အစ္စလာမ်ဘာသာ မက္ကာရွှေမြို့တော်မှာ ထွန်းကားစအချိန်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူများကို တစ်မြေတည်းနေ တစ်ရေတည်းသောက်ကြတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မဟုတ်သူ ညီနောင်သားချင်းများက ရက်စက်စွာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့လို့ အချို့ကို ပူပြင်းလှတဲ့ သဲပြင်ပေါ်မှာ နေပူခံစေပြီး ကျောက်တုန်းတွေ ဖိထားစေပါတယ်။အချို့ကို မီးကျည်ခဲတွေ ခင်းထားတဲ့ အပေါ်မှာ တရွတ်တိုက်ဆွဲပြီး လောင်ကျွမ်းစေခဲ့လို့ အရေပြားက ပျော်ကျလာတဲ့ အဆီတွေကြောင့် မီးတောင်ငြိမ်းသွားပါတယ်။ အချို့ကို လှံစွပ်နဲ့ ထိုးသတ်တဲ့အထိ ရက်စက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ရက်စက်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အစ္စလာမ်ဘာသာကို ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ပြီး မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်မှုတွေကို လက်ခံကျင့်သုံးလာစေရန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မိမိယုံကြည်ချက်ကို အသက်ထက် မြတ်နိုးတဲ့ မွတ်စ်လင်မ်များဟာ အသက်သာပေးသွားခဲ့ပေမဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကနေ နှမ်းစေ့ခန့်တောင် မယိမ်းယိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မွတ်စ လင်မ်တွေဘက်က တောင်တွေလို မတုန်မလှုပ် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်လေ ရန်သူတွေက နှိပ်စက်မှုတွေ ပိုလုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (Peace be upon him) အနေနဲ့ ဒုက္ခမျိုးစုံ ခံစားနေရတဲ့ မွတ်စ်လင်မ်တွေကို မိမိလက်ခံထားတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ နေရပ်ကိုစွန့်ခွာသွားကြရန် ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ မွတ်စ်လင်မ် အမျိုးသား ၁၀ဦး သို့မဟုတ် ၁၂ဦး နှင့် အမျိုးသမီး ၄ဦး သို့မဟုတ် ၅ဦးဟာ အဗီစီးနီးယားနိုင်ငံ (ယခု အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံ) သို့ ပြောင်းရွှေ့ (ဟစ်ဂျရတ်ပြု) ခဲ့ကြပါတယ်။ ရန်သူများက ထွက်ခွာလို့မရအောင် လိုက်လံတားဆီးခဲ့ပေမဲ့ လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဗီစီးနီး ယားနိုင်ငံကို ရောက်ရှိပြီး မကြာမီမှာပဲ မက္ကာမြို့မှာ အစ္စလာမ်ကို အားလုံးလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားလို့ နေရပ်ပြန်ဖို့ လာခဲ့ကြပေမဲ့ မြို့အနားအရောက်မှာ သတင်းမမှန် ကန်ကြောင်း ကြားရတဲ့အပြင် မွတ်စ်လင်မ်တွေကို အရင်ထက် ပိုပြီးနှိပ်စက်နေကြောင်း ကြားကြရပါတယ်။ အချို့လည်း လာလမ်းအတိုင်း ပြန်လှည့်ခဲ့ကြသလို အချို့လည်း မက္ကာမြို့ ထိရောက်အောင် သွားခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်ဖန် ဒုတိယအကြိမ် မွတ်စ်လင်မ် အမျိုးသား ၈၃ဦး နှင့် အမျိုးသမီး ၁၈ဦး ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ထပ်မံ ရွှေ့ပြောင်းကြရန် အဗီစီးနီးယားနိုင်ငံကိုပဲ ထွက်ခွာလာပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် မှာ ပထမအကြိမ်တုန်းက ပြန်ရောက်လာသူအချို့လည်း လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။
အဗီစီးနီးယားနိုင်ငံကို ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ မွတ်စ်လင်မ်တွေကို နိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်ကြီး နဂျာရှီ (Negus) က ခိုလှုံခွင့်ပေးခဲ့တာကြောင့် အေးချမ်းစွာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကျင့်သုံးနိုင် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကိုမကျေနပ်ကြတဲ့ မက္ကာမြို့သား ရန်သူများဟာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများစွာနဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို အဗီစီးနီးယားနိုင်ငံ ဘုရင်မင်းမြတ်ထံကို စေလွှတ်ပြီး ရောက်ရှိနေတဲ့ မွတ်စ်လင်မ်တွေကို မက္ကာမြို့သို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားနိူင်ရန် ကျိုးစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်သူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လည်း အဗီစီးနီးယားနိုင်ငံကို ရောက်တာနဲ့ ဘုရင်ကြီးကို အခစား မဝင်သေးဘဲ ဘုရင့်အမှုထမ်းတွေကို လာဘ်ထိုးပြီး ဘုရင်ကြီးဆီမှာ သူတို့ တောင်းဆိုတာကို ထောက် ခံပေး ကြဖို့ ကြိုတင်စီစဉ်ထားကြပါတယ်။ အပါးတော်မြဲတွေ၊ သေနာပတိကြီးတွေထဲကလည်း လာဘ်လာဘမျှော်ကိုးသူအချို့က လာဘ်ပေးသူများဘက်က ဝင်ရောက်ထောက်ခံပေး မယ်လို့ ကတိပေးကြပါတယ်။
ဒီလိုကတိစကားရရှိပြီးတာနဲ့ ရန်သူကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဟာ ဘုရင်ကြီးထံ အခစား ဝင်ရောက်ကြပါတယ်။ ဘုရင်ကြီးထံပါးရောက်တာနဲ့ ဘုရင်ကြီးကို ရှိခိုးဦးချပြီး အသင့်ယူဆောင် လာတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဆက်သပြီး “အို ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမြတ်လှတဲ့ ဘုရင်မင်းမြတ်၊ ကျွန်တော်မျိုးတို့ အထဲမှ လူတစ်စုဟာ မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာကို စွန့်ပြီး အရှင် မင်းကြီးရဲ့ အာဏာစက်အောက်မှာ လာရောက်ခိုလှုံနေပါတယ်။ အဲဒီဘာသာသစ် အကြောင်း ကျွန်တော်မျိုးတို့ မသိသလို အရှင်မင်းကြီးလည်း ကြားသိတော်မူမည် မဟုတ်ပါ။ အဲဒီလူ တစ်စုရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ နှင့် ဂုဏ်သရေရှိမြို့ခံတွေက ကျွန်တော်မျိုးတို့ကို ပြန်ခေါ်လာခဲ့ဖို့ တာဝန်ပေး စေလွှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို ပြန်ခေါ်သွားခွင့်ပြုပါ” လို့ ပန်ကြားလိုက်တာနဲ့ အခုန လာဘ်စားထားတဲ့ ဘုရင့်အပါးတော်မြဲတွေက ဝိုင်းဝန်း ထောက်ခံပေးကြပါတော့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘုရင်ကြီးက “ငါ့ရဲ့အရိပ်မှာ လာရောက်ခိုလှုံနေသူတွေကို စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး အသင်တို့ လျှောက်ထားချက်တွေ မှန်ကန်ခဲ့ရင် အသင်တို့လက်ထဲ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ဖို့ ဝန်မလေးပါ” လို့ ပြောပြီး မွတ်စ်လင်မ်တွေကို ဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ဘုရင်ကြီးရဲ့ ဆင့်ခေါ်မှုကြောင့် ရောက်ရှိလာတဲ့ မွတ်စ်လင်မ်တွေဟာ ပထမတော့ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပေမဲ့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ အသနားတော်နဲ့ တည်ငြိမ်စွာပဲ ဘုရင်ကြီးကို စလာမ် ဆိုပြီး ရိုသေစွာ အခစား ဝင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘုရင်ကြီးရဲ့ အပါးတော်မြဲတစ်ယောက်က ဘုရင်ကြီးကို ရှိခိုးဦးချပြီး အရိုအသေပြုခိုင်းပါတယ်။ မွတ်စ်လင်မ်တွေ ကလည်း “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြတ်တမန် မိုဟမ္မဒ် (Peace be upon him) က ကျွန်တော်တို့ကို တပါးတည်းသောအရှင် မြတ်အလ္လာဟ် မှအပ မည်သူ၏ ရှေ့တွင်မျှ ဦးမချရလို့ သွန်သင်ထားလို့ ဘုရင်မင်းမြတ်ကို ရှိခိုးဦးချလို့ အရိုအသေ မပြုနိုင်ပါ” လို့ ရှင်းပြ ငြင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ဘုရင်ကြီးရဲ့ မေးမြန်းချက်တွေကို မွတ်စ်လင်မ်တွေဘက်မှ တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (Peace be upon him) ရဲ့ ဦးရီးတော် အဗူတွာလစ်ဗ် ရဲ့ သား သာဝကကြီး ဂျာအ်ဖရ် (May Allah be pleased with him) က အခုလို ဖြေကြားပါတယ်။
“အို ဘုရင်မင်းမြတ်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ မိုက်မဲမှုတွေထဲမှာ နစ်မွန်းနေကြစဉ်မှာ ကျွန်တော်တို့ကို ဖန်ဆင်းကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်တော်မူသော တစ်ပါးတည်းသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို မသိခဲ့ကြပါ။ ထိုအရှင်မြတ်ရဲ့ စေလွှတ်ခြင်း ခံရတဲ့ လူသားတွေကို အလင်းပြပုဂ္ဂိုလ် တမန်တော်ကိုလည်း မသိခဲ့ကြပါ။ ကျောက်တုံးများနှင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရုပ်တုများကိုသာ ယုံကြည်ကိုးကွယ် ရာလို့ မှတ်ထင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ အသေသားတွေကိုလည်း စားခဲ့ကြပါတယ်။ မကောင်းမှုမှန်သမျှကို ကောင်းမှုကောင်းရာ ထင်မှတ်ပြီး အားပါးတရ ကျူးလွန် ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအမိုက်မှောင် ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ အချိန်ကာလမှာ မွေးမြူဖန်ဆင်းတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးအနွယ် အတွင်းကနေ တမန်တော် တစ်ပါး စေလွှတ်တော်မူပါတယ်။ အဲဒီတမန်တော်ရဲ့ မျိုးရိုးကလည်း မြင့်မြတ်သလို ကိုယ်ကျင့်တရားလည်း ကောင်းမွန်လှပါတယ်။ သာသနာရေးကိုလည်း အလွန်လေးစားသူဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတမန်တော်က ကျွန်တော်တို့ကို အခုလို လမ်းညွှန်ပါတယ်။
– တစ်ပါးတည်းသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုသာ ကိုးကွယ် ဦးချရန်၊
– ကျောက်တုံးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရုပ်တုများကို ယုံကြည် ဦးချရာ မပြုလုပ်ရန်၊
– မှန်သောစကားကိုသာ ပြောဆို နားထောင်ရန်၊
– ရမ်ဇမ်လမြတ်မှာ ဥပုဒ်ဆောက်တည်ရန်၊
– သစ္စာတရားကို လက်ကိုင်ထားရန်၊
– ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို စောင့်ရှောက်ရန်၊
– အိမ်နီးချင်းကောင်း ပီသရန်၊
– ဆွလားသ်ဝတ်ပြုမှုကို နေ့စဉ် ၅ကြိမ် မပျက်မကွက် အချိန်မှန် ဆောက်တည်ရန်၊
– အလှူဒါန ပြုကြရန်၊
– သူတစ်ပါး အိမ်ယာကို ပြစ်မှားစော်ကားမှု မပြုရန်၊
– မုသားပြောခြင်း/နားထောင်ခြင်း မပြုရန်၊
– သူတစ်ပါးကို စွတ်စွဲ ဝေဖန် ပုတ်ခတ် ရှုံ့ချခြင်း မပြုရန်၊
– မိဘမဲ့များရဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာကို အလွဲသုံးစား မပြုရန်၊
– မကောင်းမှုမှန်သမျှ ရှောင်ကြဉ်ရန်၊
– ကောင်းမှုဟူသ၍ ကိုယ်စွမ်း ဥာဏ်စွမ်း ရှိသမျှ ကျင့်ကြံကြဖို့ သင်ကြားပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကို အဲဒီ တမန်တော်က ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် သင်ကြားပေးပြီး အဲဒီကျမ်းစာပါ အမိန့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့ အညီ ကိုယ်တိုင်လည်း စံပြနေထိုင်သလို ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း နေထိုင်ကြဖို့ သွန်သင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့လည်း ကျမ်းစာပါ အမိန့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီ နေထိုင်ကျင့်သုံးကြပါတယ်။
ဒီလိုသင်ကြားတာကို လိုက်နာလို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားတွေက ကျွန်တော်တို့ကို တားမြစ်ပါတယ်။ သူတို့တားမြစ်တာကို လက်မခံလို့ အစ္စလာမ်ဘာသာပေါ်မှာ ကြံ့ကြံ့ခံနေ ထိုင်ကြတဲ့ ကျွန်တော် တို့ကို မီးကုန်ယမ်းကုန် နှိပ်စက်ကြပါတယ်။ ရက်စက်ပြင်းထန်လွန်းလှတဲ့ ညှင်းပန်းမှုတွေကနေ အန္တရာယ်ကင်းအောင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (Peace be upon him) က တရားမျှတတဲ့ ဘုရင်ကြီးရဲ့ အရိပ်မှာ ခိုလှုံပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြဖို့ အကြံပေးတော်မူတဲ့အတွက် အခုလို ဘုရင်ကြီးရဲ့ ပိုင်နက်ကို ရောက်ရှိ ခိုလှုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်” လို့ လျှောက်တင်လိုက်ပါတယ်။
Ref: Hayatus swahaba
“The Message Of Islam အပိုင်း ၂” ဆက်ရန်——
This entry was posted on March 31, 2013, in အစ္စလာမ့်သမိုင်း, အစ္စလာမ့်ရေးရာ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← “နွား”သရမ်းကြီးလွတ်နေပြီ(သို့မဟုတ်)ရခိုင်ပဋိပက္ခ အစီရင်ခံစာမထွက်မီ အာရုံပြောင်းသလား …
မျှစ်၏ ကျန်းမာရေးစွမ်းပကား →